Recep Tayyip Erdoğan iyo xisbigiisa AKP, ayaa dadka kusoo jiidanaya hadallada ad adag ee waddaniyadda ku dhisan, weerarka afka ee ka dhanka ah reer galbeedka iyo howl-gallada la dagaalanka argagixisada.
Go’aanka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan uu doonayo inuu ku qabto doorasho deg deg ah, bilo un kadib markii cod bixiyayaasha ay xisbigiisa u diideen aqlabiyadda baarlamanka, ayaa u muuqda mid si dirqi ah ku guuleysan doona.
Xisbiga madaxweynaha ee Caddaaladda iyo Horumarka ee (AKP) ayaa u muuqda mid dib u helaya kalsoonida shacabka, ka hor doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dhacaya bisha dambe.
Waxyaabaha ugu weyn ee xisbiga AKP uu kusoo jiidanayo shacabka ayaa waxaa ka mid ah; hadallada ad adag ee waddaniyadda ku dhisan, weerarka afka ee ka dhanka ah reer galbeedka iyo howl-gallada la dagaalanka argagixisada ee ka dhanka ah kooxda gooni u goosadka Kurdish-ka ah ee PKK.
Erdoğan waxa uu ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah argagixisada illaa inta uusan xittaa hal argagixiye ka nooleyn, waxaana ka hadalkiisa ka dhanka ah Kurdish-ka uu rajeynayaa inuu usoo jiido codbixiyayaashii aan ka qeyb gali doorashadii tagtay, ama u codeeyey xisbiyo kale.
Mehmet Murat Pösteki, oo ah ra’yi uruuriye ku sugan Ankara, ayaa sheegay in codadka ra’yiga ah ay muujinayaan in xisbiga Erdoğan uu dib u helayo taageeradii uu ku lumiyey doorashadii June.
Wicitaanka: Cabdullaahi Faarax Qaarey